Created on Sunday, 15 October 2017 02:22
असोज २८ - खासखास समयमा खास खास मुद्दा र विषयहरुमा आम जनताको चासो र चिन्ता बढ्ने र समयक्रममा सेलाउदै जाने हुन्छ । आसन्न निर्वाचनको कारणले गर्दा नेपालको वर्तमान राजनीतिमा पनि विभिन्न सवालमा चासो र चिन्ता निकै नै व्यग्र रुपमा बढीरहेको दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । चिन्ता र चासोका बीच जनताले सही ठाउँमा मतदान गर्ने नगर्ने निर्णयले नै मूलुकको भविष्य स्पष्ट बनाउनेछ ।
यतिबेला नेपालका कतिपय राजनीतिक दलहरु केवल सत्ता स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर कथित एकताको ढोल बजाई हिंडेका छन् र यस्तो भान पारिदैंछ अब उनीहरु केही गर्दैछन् । आफ्नो देशभित्र के हुँदैछ त भनेर चासो राख्ने जनमानसहरु यही ठूलो आवाज वरीपरी झुम्मिएको जस्तो पनि देखिन्छ । तर यो रमितामा भुलीरहन ठीक छैन, ठूलो कोलाहलको वरीपरीको झुम्याई निरर्थक छ भन्ने बारेमा जब चेतनाले मानिसलाई निर्देशन गर्दछ, यति बुझ्यो भने क्षणिक हाइफाई केही समयमा सन्नाटामा परिवर्तन भइहाल्छ । अर्थात जति नै झाइझुइमा रमिते भए पनि मानिस वास्तविकतामा नफर्की हुँदैन ।
जसरी परम्परावादी शक्तिहरुले आफ्नो सिरीखुरी समाप्त हुने भयका कारण यो या त्यो नाममा एकताको भ्रम फिंजाइरहेका छन् त्यही सिकोमा उत्पीडनको जालोबाट मुक्ति खोज्नेहरुले पनि हामी एक हुनु पर्छ भन्ने भावना तीव्र भएर आएको छ । केही हद सम्म यो कुरा सही पनि छ । तर नयाँपन र पहिचान स्थापित गर्न चाहनेहरुले घोषित परिस्थितिबाट तरङ्गित हुनु कति सही छ त ? परम्परावादी चिन्तन र व्यहोराबाट मुक्त हुन नचाही निहित स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर जोडबल गरिने त्यस्ता अपेक्षा कति सार्थक होला त ? यो ज्यादै नै सोंचनीय मात्र होईन पेचिलो विषय पनि हो ।
यसै सन्दर्भमा हाम्रा कतिपय पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताहरुले विचार मिल्नेहरुसंग पार्टी एकीकरण गर्दै जान ढिला गर्न नहुने बताईरहनु भएको छ । यस भावनालाई पार्टीले कहिल्यै पनि गौण विषय बनाएको छैन । तर उहाँहरु सबैले बुझ्न के जरुरी छ भने विचार कहिल्यै कसैको मिलीरहेको हुँदैन । बरु विचारमा सहमत हुने नहुने भन्ने कुरामा ख्याल राख्नु पर्दछ । विचारमा सहमत भएर पनि निहित स्वार्थ हावी भईदियो भने साँगठनिक जीवनमा त्यो कति पाच्य हुन्छ त भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
प्रसंगवस राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको नेतृत्वमा पहिचानमा आधारित पाँच दलीय संघीय गठबन्धन बनेको थियो र छ । आसन्न निर्वाचन र त्यसपछिको परिणामलाई मध्यनजर गर्दै गठबन्धन बीचमा पार्टी एकीकरणको धार्नी न बिसौलीको छलफल बैठक चल्दै आईरहेको पनि हो । यसै बीचमा यही असोज २५ गते चुनावी समीकरण र पार्टी एकता सम्बन्धमा हाम्रो बैठक राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बस्यो । सो बैठकमा हाम्रा अध्यक्ष केपी पालुङ्वा ज्यूले गठबन्धनको सदस्यको नाताले १० बुँदे प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो । सो १० बुँदे प्रस्ताव अत्यन्त लचिलो थियो । एकीकरण र सहकार्यको सवालमा प्रस्ताव के गरिएको थियो भने गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको प्रत्येक्ष तर्फको उम्मेद्वारहरुलाई निजहरुको चुनाव चिन्हमा मत हाल्न सबै पार्टी सहमत हुने र राष्ट्रिय समानुपातिकका लागि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको चुनाव चिन्ह घरमा मत राख्न सबै दलहरु प्रतिबद्ध हुने । प्रदेश र केन्द्रमा समानुपातिक मतका लागि एक भइसकेपछि उहाँहरुले तोकेको उम्मेद्वारहरुलाई पनि समानुपातिक सदस्यमा पार्टीले मनोनित गर्ने भन्ने सम्मको प्रष्ट आशय थियो । यस सन्दर्भमा सबै दलले नेपाः राष्ट्रिय पार्टीको चुनाव चिन्ह खड्ग लिएर निर्वाचनमा जाने र निर्वाचन पछि सबै दलले आफ्नो पहिचान त्यागी नयाँ दल घोषणा गर्ने जिकिर रहयो । खासगरी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेनजीको यो जिकिरमा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु लर्खराएको जस्तो लाग्यो ।
एकातिर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीलाई लामो विरासत बोकेको अभिभावक संगठन भनीरहन पनि नछोड्ने अर्कोतिर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको लामो समयको लगानी र विरासतलाई नै धुलीसात पार्ने पड्यन्त्रको रखवारी गर्न उहाँहरुलाई कसले उक्साईरहेको छ, एकताको सन्दर्भमा चिन्ताको विषय यो हो । गठबन्धनमा रहेका दलहरुले तत्काल आफुलाई ‘करेक्शन’ गर्न नसक्ने अवस्थालाई मध्येनजर गरी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले १० बुँदे प्रस्ताव पेश गरेको हो । यसले गर्दा सबैको सम्मान पनि हुने र भविष्यमा एक भएर अगाडि जान हामीलाई झनै सजिलो हुने विश्वास गरिएको हो ।
कुमारजीको जस्तो वर्तमानको हुटहुटीलाई मात्र सम्बोधन गरेर जाँदा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीलाई मात्र होईन तमाम मुक्तिकामी जनता र सिंगो मूलुकबासीलाई जुन धोका हुनेछ त्यसको क्षतिपूर्ति हामीले निहित स्वार्थमा विलय गराउन सकिदैन । अब प्रदेश र संघीय संसदको जुन निर्वाचन हुँदैछ कतिपय साना दलका एकाध व्यक्तिले सुविधा प्राप्त गर्दैमा त्यसको तात्विक भिन्नता समाजले पाउने छैन किनभने अबको संसद संविधान सभा होईन । त्यस हुनाले पनि मुक्तिकामीहरुका सन्दर्भमा हामीले ज्यादै लचिलो प्रस्ताव पेश गरीरहेका छौं । होइन भने त हामीले सिधै चुनाव चिन्ह घर लिएर जाऔं भन्ने जिकिर गरीराखेको हुन्थ्यौं । तर बुझीराख्न के जरुरी छ भने अनेकन राजनीतिक आधीबेहरी सृजना गरी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र यसमा आवद्ध इमान्दार नेता, कार्यकर्ता, शुभचिन्तकको दोहोलो काढ्न केही कसर बाँकी राखिएको छैन । कथित नयाँ शक्तिको दूत भई आएकाहरुको चुरीफुरी एक वर्ष अघि पार्टीले थामेको पछिल्लो कडी थियो ।
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी विगत अढाई दशक भन्दा लामो समयदेखि निरन्तर र अविचलित रुपमा लड्दै आएको सबै नेपालीहरुको राजनीतिक, सामाजिक साथै आर्थिक अधिकारका र विकासका लागि हो । जनतालाई अधिकार सम्पन्न गरेर नै समृद्धिको मार्ग कोर्न सकिन्छ र यसरी मात्र मूलुकको स्थायी शान्ति र दिगो विकास सम्भव छ भन्ने अडान राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको हो । स्थापनाकालदेखि आफ्ना मुद्दाहरुमा पार्टी अविचल छ । हजारौं मुक्तिकामीहरुलाई सजग र सवल बनाउने क्रममा छ । कहिंयौ उतारचढावका वाबजुद पार्टी विस्तारै देशव्यापी हुँदैछ । अधिकाँश नेपालीहरुले भोलीको नेपालको भरपर्दो नेतृत्वको रुपमा यस पार्टीको विचार र संगठनलाई आत्मसाथ गर्दै जाने क्रम घट्दो छैन ।हो, यतिका वर्षमा पनि प्राविधिक रुपमा पार्टीले प्रतिनिधि उभ्याउन नसकेको तीतो सत्य जगजाहेर छ । तर पनि मूलुक निर्माण अभियानमा यस पार्टीमा आवद्ध भएर जति नेपालीले योगदान गरेका छन् त्यसको सामूहिक प्रतिफल विस्तारै सतहमा आउने क्रममा छ । दीर्घकालिन राजनीतिक जीवनमा लडाईको यो परिणामलाई जोकोहीले कम आँक्नु हुँदैन ।
कल्पना गरौं, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले जनमुक्ति विचारधारा सम्प्रेषण गर्ने हिम्मत कायम नगरेको भए नेपाली समाजमा फरक तर यथार्थ विचारको बीजारोपण हुन कति सम्भव हुन्थ्यो होला ? पार्टीका आम नेता कार्यकताहरुले पार्टीको प्रभावशाली भविष्यको लागि चिन्तन मनन गरीरहेकै बखतमा तत्काल परिणाम नदेखिदा निराशाको एउटा माहोल नबन्ने पनि होईन । फेरि पनि मूलुक र मूलुकवासीका खातिर पार्टीले जुन योगदान गरीरहेको छ यसको साथै समय अनुसारको थप मेहनत र प्राविधिक ज्ञानको फैलावट गराउँदै लैजान सकेको खण्डमा पार्टीको भविष्य तत्कालै झलमल हुन रत्तिभर पर्खनु पर्ने छैन । सयौं वर्षदेखि उत्पीडन खेप्दै केवल माग्ने अवस्थामा रहेका सबै नेपालीहरु (जाति÷समुदाय, वर्ग, लिङ्ग) लाई हामी दिने ठाउँमा पुरयाउन चाहन्छौं । यसका लागि ‘आमूल परिवर्तन चाहनेहरुको भर, चुनाव चिन्ह घर’ नै हो भन्नेमा सबै जनता एक हुन रत्तिभर ढिला नगरौं ।
(लेखक: राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टी, केन्द्रिय उप-महासचिब हुनुहुन्छ)